China Kraft Paper Flat isikhwama phansi ifektri abakhiqizi | Hong Bang
Isikhwama esimhlophe sephepha lesikhwama esiphansi esiFlethi
Isikhwama se-Kraft Paper sokupakisha kwekhofi netiye
Ukuphrinta Kwamafilimu Okuphrintiwe Kwesiko kwe-Auto ...
I-Roll Ephrintiwe Ngokwezifiso Ephakanyisiwe
Isikhwama sangaphansi se-Kraft Paper Flat
Ukuhlanganisa izici ezinhle kakhulu ze-Quad Seal ne-Stand Up Pouch, I-Kraft Paper Flat Bottom Bag (eyaziwa nangokuthi yi-Box Pouch) inesikhalazo esiphezulu, ngenkathi ikhulisa kokubili ishalofu nendawo yokupakisha nge-gusset yesitayela sekhathoni esisezansi. Flat Bottom Izikhwama zivumela ukugcwaliswa okulula okuphezulu futhi kufanelana nezinhlobonhlobo zezicelo zemakethe, kusuka kokudla kwasolwandle, ikhofi, ne-muesli, kuya ekudleni kwesilwane nemikhiqizo yokulima.
Izici ze-Kraft Paper Flat Bottom Bag
Ukuqiniswa okuqinile okuqinile kunikeza ukuqina okuphelele kwekhono lokuzimela elifanele.
Ama-gussets amaningi avumela ukufaka uphawu lokubeka uphawu nokwakhiwa kwendawo.
Umumo ofana nebhokisi unikeza ukusetshenziswa okuphezulu kwesikhala, kokubili eshalofini nasekuhambiseni.
Kungafaka izinto ezahlukahlukene ezikhethekile, iziphu zangaphambili ezingaphinde zisebenze, ama-spouts, ama-notch adonsa kalula, amagoli e-laser njll angenaphutha ezinhlotsheni ezahlukahlukene zemikhiqizo eyomile, yesiqandisi nefriji
Izici ze- I-Kraft Paper Flat Bottom Bag
Isikhwama sangaphansi se-Kraft Paper senziwa kusuka ezingxenyeni eziningana zezinto zokuvimbela ezingahlukaniswa ngamaqembu amakhulu ayi-3, ahlangana ukuhlinzeka isikhwama ngezici eziqinile nezimelana nokubhoboza. Lawa maqembu ama-3 yilawa:
Isendlalelo sangaphandle: Ivumela ukuphrinta kwemidwebo ukwenzeka, okuphethe ukukhangisa okudlulisa umlayezo womkhiqizo nokuheha abathengi.
Ungqimba Middle: Isebenza njengesithiyo sokuvikela ukuqinisekisa ukuthi okuqukethwe kwesikhwama kugcinwa kuphephile futhi kukusha.
Isendlalelo sangaphakathi: Isendlalelo esibaluleke kunazo zonke kulezi ezintathu. Lolu ungqimba luvame ukuvunyelwa yi-FDA ukuqinisekisa ukuthi ukudla kuphephile lapho uhlangana nokupakisha. Futhi kuyabekwa ukushisa ukuqinisekisa amakhasimende ukuthi isikhwama asiphazanyiswanga.
Isikhwama sokudla kwesilwane iPetme Stand Up sikhwama futhi sivumela izici ezenziwe ngokwezifiso ezinjengeziphu, izimbobo eziphezulu, izinyembezi zezinyembezi kanye newindi ukuthuthukisa ukusebenza kwalo
Ukuphepha nekhwalithi ephezulu
kuzoba yisimiso sethu sokuqala. Yonke imikhiqizo yethu yenziwa ngezinto zebanga lokudla okusho ukuthi ifilimu esiyisebenzisayo, uyinki nomugqa wokukhiqiza ukuphepha okungu-100% kuwo wonke umuntu omdala ngisho nengane. Ngaphezu kwalokho, siqinile ngekhwalithi okusho ukungabekezeleli nhlobo kwanoma yiluphi uhlobo lokuyekethisa olubonisa ekwakhiweni okuqinile, ukuqina komoya nokuphrinta okucacile. Ukupakisha umdlalo obucayi futhi ophelele ngokufunwa kwamakhasimende kuyohlale kuyinjongo yethu.
Design and ngezifiso
Nakhu Ukupakisha kwe-HONGBANG. Sinikeza izixazululo ezahlukahlukene zokufaka izikhwama zokudla ngezidingo ezahlukahlukene nokusetshenziswa. Sitshele imfuneko sakho sizohlangabezana nazo zonke izinhlobo zezidingo zakho. Asenzi imikhiqizo futhi sizama ukukuyisa kuyo; silalela izidingo zakho nobunjiniyela obusha obuzoxazulula izinselelo zakho zokupakisha.
Sineqembu elisebenza kahle lamakhasimende ukuphendula nokuxazulula umbuzo kungakapheli amahora angama-24. Icala ngalinye lizoba nomuntu othize ukuqinisekisa ukuthi ukwakheka, ubuningi, ikhwalithi nosuku lokulethwa kuyafana nemfuneko. Siyathanda ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezihamba phambili futhi sinikeze ukusekelwa okuningi kumakhasimende ethu.
Langaphambilini Flat Bottom & Stand Up Bag
Olandelayo: I-Roll Ephrintiwe Ngokwezifiso Ephakanyisiwe
Isikhwama Sekhofi Esiphunga
Isikhwama Sokudla Kweplastiki
Ukupakisha Izikhwama zepulasitiki
Ukuphrinta Kwezikhwama Zepulasitiki
Flat isikhwama phansi